UCanzibe 23, 2018 admin
Bank of America patents blockchain isixhobo yokhuseleko
Bank of America uzuze “ukhuseleko kunye data umgaqo-patent” ngokutsho US Patent Office Uphawu, ukuba indlela yokulawula ukungena kwiinkalo ezithile womnatha permissioned blockchain.
“Ikhona imfuneko Ukubonelela amaziko ezinyuliweyo / abasebenzisi ikhono ukuchonga ngokulula iibloko lwayamene abasebenzisi ezikhethiweyo’ ukukhathalela, kwaye xa sele zichongiwe iibhloko ziye, iifitsha zokhuseleko ukuqinisekisa ukuba amaqumrhu ezikhethiweyo / umsebenzisi ukuba ezisafunwa iibhloko ezi, inyaniso, abasebenzisi anegunya.”
Russian State Duma ngabo bill kushishino crypto
Russia iPalamente, the State Duma, iye yavuma imithetho emitsha elawula icandelo crypto i. Imithetho ukuchaza cryptocurrencies kunye imiqondiso njengomhlaba, babeke ukucaciswa Ngokusebenza kunye crypto kunye nobugcisa ezinxulumene-blockchain.
410 amasekela yavuma oyilwayo andiva, okuvota omnye kuphela kulo.
Lo Mthetho osaYilwayo "On asethi eziyimali Digital" nto leyo eye phantsi ingqalelo ukususela kunyaka ophelileyo kunye nemihla yokugqibela ka July 1, lijongene cryptocurrencies, kwakunye ubugcisa ezinxulumene-blockchain ezifana izivumelwano smart, kunye nezimbiwa.
CFTC imiba isikhokelo yemizimveliso ezifundisa yezabelo cryptocurrency
i U.S. Ezityiwayo Futures Trading Commission (CFTC) likhuphe isikhokelo entsha ukutshintshiselana uceba ukudwelisa iimveliso nesimo ezinxulumene-cryptocurrency.
Yenzelwe ukunceda nxaxheba kwimarike ukuphuhlisa iinkqubo zolawulo lomngcipheko kunye “yokulawulwa ukucaciselwa” on “iindawo eziphambili ezifuna ukuqwalaselwa ngakumbi” ezifana nendlela 'ukulandela iinkqubo yolawulo efanelekileyo malunga kuqaliso ezi mveliso,” ngokutsho DCR kumlawuli Brian Bussey.
Marshall Islands Kwathi ekwenziweni komthetho Crypto imali yabo yesizwe
cryptocurrency wabo mtsha ubizwa ngokuba iNkosi (SOV) kwaye uza kuthatha indawo USD njengoko lwemali kazwelonke yedwa.
Le lwemali entsha iya kuba ithenda olusemthethweni zomthetho amashishini kunye 53,000 abemi Marshall Islands – njengombuso ozimeleyo kunye nelungu UN.
Lo cryptocurrency lokuqala kuphela yobukhosi kusayina komthetho kwaye kubalulekile kuba (e theory okungenani) oko kuthetha ukuba amaziko ezemali afana neebhanki kunye Visa kuya kufuneka ukuba ukwamkela SOV njengoko ngoku ithenda ngokusemthethweni uhlanga lobunganga.
An kuhlaselwa Abaxhobileyo komthetho Canadian Crypto Exchange
Ngokuhlaselwa abaxhobileyo bagqithele t ...
Iprojekthi Blockchain DFINITY Stiftung uphakamisa $ 61M
organiz non-nzuzo A ...
Indus crypto yaseJapan ...
Post Previous:Blockchain News 22.05.2018